फिल्म र रियलिटी
राजनीतिक दल निकट ईन्जिनीयरहरुको सँगठनले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिले खुल्ला रुपमा भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ भनेर भनेका छन् ।
“पचास–पचास कोष दुर जब कोई रिस्वत लेता है तो सब कैहता की मतले, वरना गब्बर आजाएगा” यो डायलग चर्चित अभिनेता अक्षय कुमारद्धारा अभिनित बलिवुड हिन्दी फिल्म–“गब्बर ईज ब्याक” को चर्चित डायलग हो ।
जुन बेला यो फिल्म नेपाल र भारतको सिनेमा घरहरुमा रिलिज भएको थियो, त्यतिबेला यो फिल्म हेर्ने हरेक उ व्यक्तिले आफ्नो ठाउँमा गब्बरको कमि महसुसको कल्पना गरेको थियो ।
असलमा यो फिल्म भ्रष्ट र भ्रष्टाचारले एक समाजलाई, शहरलाई र देशलाई कसरी बर्बाद पारिरहेको हुन्छ त्यसको बारेमा बनाइएको छ । हुनतः फिल्ममा सरकारी कर्मचारीहरुलाई झुण्डयाएर जन–कारवाहीको काल्पनिक दृश्य देखाएको छ । तर, सो दृश्यलाई हरेक दर्शकले मन पराएका थिए ।
फिल्ममा गब्बर भन्ने अक्षय कुमारले नाम गुण्डाको राखेका हुन्छन तर काम चैँ हिरोको गरिरहेका हुन्छ । त्यसैले त्यसमा भनिएको छ –“नाम भिलेनका, और काम हिरोका” । उनले एक शहरमा भएका सबभन्दा बढी भ्रष्ट सरकारी कर्मचाीलाई सूचि बनाएर जन–कारवाही गरेको देखाएका छन् ।
हो, डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले २०७८ साल कार्तिक ४ गते विहिबार दिउँसो गरेको कार्यलाई पनि जन–कारवाहीकै सँज्ञा दिइएको छ । जब सरकारको सबै निकाय र अँगहरु अपाँग हुन्छन त्यतिबेला आम जनताले आफ्नो मनलाई सुनेर गरेको फैसला वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिमाथि गरिएको कारवाहीलाई जनकारवाही भनिएको छ ।
पटक पटक डा. राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरुले सँघीय नेपालको प्रदेश नम्बर २ को अस्थायी राजधानी रहेको जनकपुरधामस्थित संघीय खानेपानी आयोजनाका निमित्त प्रमुख राजेश कुशवाहालाई भ्रष्टाचार गरेको र काम नगरेको आरोप सहित हिलो दलेर नगर घुमाएको घटना अहिले जल्दोबल्दो छ ।
जनकपुरमा प्रत्येक राजनीतिक दलका आफ्नो भातृ सँगठन, भागिनी सँगठनको रुपमा गठन गरिएको ईन्जिनीयरहरुको सँगठनले डा. सिके राउतको विरोधमा ओर्लिएको देखियो । सेम टु सेम फिल्म “गब्बर ईज ब्याक” को दृश्य दोहरिएको महसुस गरियो ।
गब्बर सिँह नाम नसुन्ने अन्त्यन्तै कम व्यक्ति होलान । हिन्दी फिल्म “शोले” को मुख्य भिलेनको भूमिका निर्वाह गरेका डाकु गब्बर सिँहलाई नाकारात्मक अभिनेताको रुपमा फिल्ममा देखाइएको छ । फिल्ममा गब्बरको डर ५० कोषसम्म चलेको देखाएको छ ।
सोही डरमा आधारित फिल्म “गब्बर ईज ब्याक” को परिकल्पना गरिएको देखिएको छ । यस फिल्ममा जसरी अभिनेता अक्षय कुमारले शहरका भ्रष्ट कर्मचारीहरुको सूचि बनाएर जन–कारवाही गरेको छ सोही अनुरुप डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरुले विहिबार जन–कारवाहीको हबाला दिँदै सरकारी ईन्जिनीयरलाई अर्ध नग्न पारी बजार घुमाए ।
फिल्म गब्बरमा अक्षय कुमारले राखेको सूचिमा भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरुको पनि क्याटेगोरी (समूह) छुटयाएर राखेका हुन्छन् । जो सबभन्दा बढी भ्रष्ट हुन्छन उसलाई पहिले मृत्यूदण्ड (कानुन हातमा लिएर) दिएको देखाईन्छ ।
सो शहरमा अक्षय कुमारले निरन्तर एक सरकारी कर्मचारीलाई लक्षित गर्छन् । चाहे त्यो कुनै पनि निकायका किन नहोस् । यहाँसम्मकी प्रहरी अधिकारीलाई समेत उनले जन–कारवाही गरेको देखाइएको छ । अति भ्रष्ट प्रहरीलाई समेत उनको समूहले जन–कारवाही गर्छन् ।
यहाँ अक्षय कुमारको फिल्म गब्बर र डा. सिके राउतको अवतार पूर्णत मेल खान्छन् । अक्षय कुमारको नेश्नल कलेजका विद्यार्थीहरुको सहारा लिएर कार्यलाई अन्जाम (अन्तिम रुप) दिन्छन् । यहाँ डा. सिके राउतको पार्टीमा डाक्टर, प्रोफेसर, ईन्जिनीयरहरु अधिक छन् ।
अक्षय कुमारको फिल्म गब्बरलाई मन नपराउने एकदम कम व्यक्ति होलान, त्यो पनि त्यस्ता व्यक्ति जो की प्रत्यक्ष रुपमा भ्रष्टाचारमा तल्लिन छन् । उनले आफ्नो हविगत सोचेर पनि त्यो फिल्मलाई मन नपराएको हुन सक्छ । तर, सिनेमामा दर्शकले हरेक दृश्यमा सिटी बजाएका थिए भने बाहिर निस्केर हाम्रो जनकपुरमा पनि यस्तै हुनुपर्ने, यहाँ पनि गब्बर जस्तो मान्छेको खाँचो रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
आज अक्षय कुमारको फिल्म जस्तै परिकल्पनालाई मूर्तरुप दिइएको छ भने त्यो बेला गब्बरको कमी महसुस गर्नेहरु आज गब्बरकै विरोधमा उत्रेका छन् । हो, फिल्ममा कुनै अर्को राजनीतिक पार्टीलाई देखाएका छैनन् । नत अक्षय कुमार नै कुनै राजनीतिक दलसँग सम्वद्ध हुन्छन्, उनी स्वतन्त्र युवा (प्रोफेसर) हुन्छन् ।
अक्षय कुमारसँग काम गर्ने उनका समूहका युवकहरुले गब्बरको लागि आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउन तयार हुन्छन् । ठीक यहाँ डा. सिके राउतको लागि उनका कार्यकर्ताहरु जतिपटक र जति बर्ष पनि जेल जानको लागि तम्तयार देखिन्छन् । गब्बरले गरिहेको कार्य सहि हो, सरकारको सिस्टमबाट पराजित भएर हरेश खाएका युवाहरु अन्त्यमा गब्बरको बाटो रोज्छन्, यहाँ पनि सरकारी कर्मचारीहरुको प्रवृतिले जनकपुरको माहौल गरम भएको भन्न सकिन्छ ।
ईन्जिनीयरको कारणले बनेको फिल्म “गब्बर ईज ब्याक” र जनकपुरको “जनकारवाही”
फिल्म गब्बर ईज ब्याक एक ईन्जिनीयरको कमि कमजोरीले पुरै फिल्म बनाइएको छ । भ्रष्ट सरकारी कर्मचारीले हस्पिटलको बिल्डिँग बनाउने ठेकेदारसँग कमिशन (घुस) लिएर नक्कली काम गराउँछन् । फलस्वरुप अक्षय कुमारकी श्रीमति करिना कपुर (फिल्ममा श्रीमतिको भूमिका) सोही बिल्डिँग भत्किदाँ ज्यान गुमाउँछिन् । फिल्ममा उनी गर्भवति हुन्छिन्, नयैँ बिल्डिँग खस्दा धेरै जनाको ज्यान जान्छन् त्यसमा अक्षय कुमारकी श्रीमति पनि हुन्छन् ।
उनको श्रीमति परेछि र अधिक जना मरेपछि उनी यस्ता बिल्डिँग बनाउन दिने, मापदण्ड विपरित बनाएको, कमसल वस्तु प्रयोग गरी बनाएको बिल्डिँको बारेमा जानकारी हाँसिल गरी ठेकेदार र कर्मचारीलाई कारवाहीको लागि सरकारी निकायमा धाउँछन् । तर, कसैले उनलाई सुन्दैनन्, अन्ततः उनले “जन–कारवाही” गर्न बाध्य हुन्छन् ।
हो, यस्तै, डा. सिके राउतका कार्यकर्ताहरुले पनि निराश भएरै जन–कारवाहीको मार्गमा आउन बाध्य भएको देखिन्छन् । फिल्ममा अक्षय कुमारको तौर तरिका गलत हुन्छन्, त्यसरी नै डा. राउतका कार्यकर्ताहरुको पनि तौर तरिका गलत नै छन् । जनकारवाहीको अन्य तरिका अपनाउन सकिन्थ्यो, तर अर्धनग्न पारेर बजार घुमाउनु कतही उचीत थिएनन् ।
ईन्जिनीयर राजेश कुशवाहाले भ्रष्टाचार गरेको कुनै प्रमाण छैनन, तर उनले देखाएको व्यवहार, एक सरकारी कर्मचारीले आफ्नो ओहोदामा बसेर गर्नुपर्ने काम ईमान्दारितापूर्वक नगरेको भनेर जसले पनि भन्छन् । सिके राउतको कार्यकर्ताको तरिका मात्र गलत भएको छ । हरेक अड्डामा भएका भ्रष्ट कर्मचारीलाई सरकारको अँगले कारवाही नगरे आम नागरिक यस्तो गर्न बाध्य हुनु स्वभाविक पनि हो ।
फिल्म र रियलिटीमा फरक
फिल्ममा गब्बरको सपोर्टमा शहरभरिका विद्यार्थी, पेशाकर्मीहरु पनि आउँछन् । उनले गरेको काम सही हो भनेर सपोर्ट गर्छन् , यद्यपी उनले कानुन हातमा लिएर कानुन विपरित कार्य रहेको आफैँ स्वीकार गर्छन् । सिस्टमले गर्नुपर्ने काम एक आम नागरिकलाई गर्नुपर्ने बाध्यतालाई पनि प्रदर्शन गरिएको छ फिल्ममा ।
डा. सिके राउतको विरोधमा विभिन्न दलका भातृ सँगठनहरु उत्रेका छन् । नेपाली काँग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्र नजिकको ईन्जिनीयरहरुको समूहले जनमत पार्टीको खुलेरै विरोध गरेका छन् । फिल्ममा गब्बरलाई सपोर्ट गर्छन भने रियलिटीमा मधेशका गब्बर सिँहलाई विरोध गरिएको छ ।
ईन्जिनीयरहरु भन्छन्ः भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ
ईन्जिनीयर राजेश कुशवाहालाई डा. राउतका कार्यकर्ता सहित केही स्थानीयहरुले हिलो दलेर कपडा च्यात्दै नगर घुमाएको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै जनकपुर सहित विभिन्न जिल्लाका पेशाकर्मी ईन्जिनीयरहरुले भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ भनेर अप्रत्यक्ष रुपमा ईसारा गरेका छन् ।
ईन्जिनीयरको कारणले अझै डुबेको जनकपुरधामको विकासको लागि सधैँ जनकपुरधामका मेयरलाई दोष दिने उही ईन्जिनीयरहरुले आफ्नै पेशाकर्मीको कुकर्मले जनकपुर डुबेको भनेर कहिल्यै महसुस गरेनन् । एडिबीको करोडौँको परियोजनाले पनि ईन्जिनीयरको कामले अझै जनकपुर डुबानमै पर्छ । यसप्रति एउटा नै ईन्जिनीयरले कहिल्यै बोलेनन् ।
विहिबार विभिन्न राजनीतिक दल निकट ईन्जिनीयरहरुको सँगठनले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिले खुल्ला रुपमा भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ भनेर भनेका छन् । जसरी प्रदेश २ मा अख्तियारले छापा हान्दा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री एवम् जसपाका नेता कार्यकर्ताहरुले भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ भनेर मोटरसाईकल जुलुस निकालेका थिए । ईन्जिनीयरहरुले पनि जनमत पार्टी र सिके राउतको विरोधमा विरोध प्रदर्शन गरे ।
अब, डा. सिके राउतले विहिबारको घटनालाई जनकारवाहीको सँज्ञा दिँदै जनता आजित भएर कारवाही गरेको दाबी गरिरहेका छन् । उनले सरकारको सम्बन्धित निकायले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेपछि जनताले सजाय दिएको बताएका छन् । यो सही हो वा गलत हो जनताले समाजिक सँजालमा आ आफ्नो तर्कहरु अझै राख्दैछन् ।
फिल्म गब्बरमा अक्षय कुमारका दर्जनौ सहयोगीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरी उनको योजना, गब्बरको ठेगाना, विवरण सोध्छन् । उनीहरु मर्न तयार भएपनि उनको बारेमा बोलेनन् । यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले सिके राउतका दर्जनौ कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेका छन् । करिब डेढ दर्जनमाथि उपद्रवको मुद्दा समेत चलाएको छ ।
NOTE: सममायिक घटनामा आधारित रहेर प्रस्तुत गरिएको नितान्त व्यक्तिगत विचार मात्र हो ।